နမာဇ် နှစ် ခုအား တစ်ချိန်တည်း ၌ ပေါင်းဖတ် ခြင်း/ အာယာသွလ္လာဟ် မကာရေမ် မို ရှီးရာဇီး
ဧပွီ ၅, ၂၀၁၇ - ၁၁:၄၆ ညနေ News Code : 822128 Source : ABNA Link:
အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မို ရှီးရာဇီး ရေးသားထားသည့် န မာဇ် နှစ် ခုအား တစ်ချိန်တည်း ၌ ပေါင်းဖတ် ခြငအကြောင်း ကို အဗ်နာ ချစ် ပရိတ်သတ်များအတွက် ဖော်ပြ အပ်ပါတယ်။
နမာဇ်သည်အဖန်ဆင်းခံနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်အကြားအရေးအကြီးဆုံး ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ပြုစုပျိုးထောင်ပဲ့ထိန်းဖို့အကောင်းဆုံးဝစီ လာ၊ မိမိကိုယ်စမ်းစစ်ပြုပြင်ဖို့၊မိမိကိုယ်တည်ဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးအကူအညီ၊မကောင်းမှုများမှတားမြစ်ပေးသောအရာ၊အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောအရာဖြစ်ပေသည်။
ဤနေရာ၌ကျွန်တော်တင်ပြသည်မှာနေ့စဉ်နမာဇ်ဝတ်ပြုရသော(၅) ကြိမ်နမာဇ်ဖြစ်ပါသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သည်ဤနမာဇ်များကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းဝတ်ပြုရန်ဝါဂျစ်(ပ)အဖြစ်အမိန့်ပေးထားပါ သည်။
နမာဇ်ကို(၎င်းအချိန်ထက်)စော၍ဖတ်ခဲ့လျှင်နမာဇ်မပိုင်ချေ။သို့မ ဟုတ်ပါက၎င်းနမာဇ်ကိုအချိန်(၃)ချိန်အတွင်းဖတ်ရွတ်မည်ဆိုလျှင်လည်း ဇဟိုရ်၊အစဲရ်တွဲပြီး၎င်းမဂဲရစ်(ဂ)နှင့်အေရှာတွဲပြီးဖတ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော်စွန်နီပညာရှင်အများစုသည်အာရဖာကွင်းပြင်၌နေ့လည် နမာဇ်ဇေဇဟိုရ်နှင့်အစဲရ်တွဲဖတ်ခြင်း၊အီးဒ်ဒေကုရ်ဘာန်ည၌မဂဲရစ်(ဂ)နှင့် အေရှာတွဲဖတ်မှခြင်းမှအပကျန်အချိန်များ၌(၅)ကြိမ်ဝတ်ပြုရန်ဝါဂျစ်(ပ)ဟုဆိုထားပေသည်။
ထို့အပြင်မြောက်များစွာသောစွန်နီဖေကာပညာရှင်များအနေဖြင့် လမ်းခရီး၊မိုးရွာနေချိန်၊ဂျမာအတ်မဖြစ်ချိန်၌နမာဇ်များကိုပေါင်းဖတ်နိုင် ကြောင်းပြဆို ထားပါသည်။
အတွေ့အကြုံအရနမာဇ်ငါးကြိမ်ကို(၅)ချိန်၌ဖတ်ဖို့အရေးပေးထား ခြင်းသည်နမာဇ်ကိုမေ့လျော့ခြင်း၊အလေးမထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ဤကဲ့သို့(၅)ကြိမ်ဖတ်ရမည်ကိုအလေးပေးခြင်းဖြစ်ပေသည်။လူအတော်များများ သည်အလုပ်မအား၍ဟုနမာဇ်နှင့်ဝေးနေကြပေသည်။
စွန်နီဓမ္မသတ်ပညာရှင်အများစုသည်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ဟဒီးစ်တော် အကူအညီဖြင့်လမ်းခရီး၌၊မိုးရွာသွန်းနေချိန်၌အဘယ်ကြောင့် ပေါင်းဖတ်နိုင်ကြောင်း၊အတိတ်ဖြစ်ဖြစ်၊လက်ရှိကာလအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းဖတ်နိုင်ကြောင်းဆိုသောအချက်ကိုတွေ့ရှိရပေသည်။
ယခုမျက်မှောက်ကာလတွင်လူထု၏ဘဝသည်လုံးဝပြောင်းလဲနေ ပြီးဖြစ်ပါသည်။စက်ရုံများ၊ရုံးများ၌အလုပ်လုပ်နေကြပြီး၊ကျောင်းသား/သူများအတွက်စာသင်နေရသည့်အချိန်များနေသဖြင့်နမာဇ်(၅)ကြိမ်အား(၅)ချိန်အ တွင်းဖတ်ဖို့အရမ်းခက်ခဲနေပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်ရှီအာအေမာမ်(အ.စ)များ၏ရီဝါယတ်အကူအညီဖြင့်နမာဇ်ကိုပေါင်းဖတ်ခြင်းလူထုအတွက်၎င်းတို့ကိစ္စလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊နမာဇ်ကိုအချိန်အတွင်း၌လည်း ဖတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊နမာဇ်ဖတ်သူအရေအတွက်မှာလည်းပိုမိုများလာပေ မည်။
ပို၍ကောင်းသည်ကား - بُعِثْتُ إلَى الشَّرِيعَةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ အတိုင်းနှင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏(၅)ကြိမ်နမာဇ်ကို(၅)ချိန်ဖတ်လျှင်ပို၍မြင့်မြတ်သည်ဟုဆိုထားသည်ကိုအရေးပေးပြီးဟဒီးစ်ကိုလည်းလိုက်နာ ရာဖြစ်အောင်၊လူထုအား(၅)ကြိမ်နမာဇ်ကို(၃)ချိန်အတွင်းဖတ်ပိုင်ခွင့်ပေး ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဤကဲ့သို့ခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြင့်လူထုအနေဖြင့်အလုပ်တစ်အားများ၍ နမာဇ်(၅) ကြိမ်ကို(၅)ချိန်အတွင်းမဖတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ချေ။
အဟ်လေစန္နတ်၏ကျော်ကြားသောကျမ်းကိုး၊ကျမ်းကားများဖြစ် သည့်ဘုခါရီ၊စဟီးမွတ်စလင်၊စိုနန်နေသေရ်မေဇီး၊မောင်းသာအေမာလစ်(ခ)၊မွစ်နက်ဒေအဟ်မဒ်၊စူနန်နေစာအီး၊မွစ်စနှစ်ဖ်အဗ်ဒွလ်ရာဇက်(က)စသည် ဖြင့်အနည်းဆုံးရီဝါယတ်တော်(၃၀)နမာဇ်နှစ်ခုအားခရီး၌မဟုတ်၊မိုးမရွာ၊ အန္တရာယ်မရှိ ချိန်၌ပင်ဖတ်ခဲ့ကြောင်းလာရှိပေသည်။
عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة فى غير خوف صلّى رسول الله(صلى الله
يَحْرَجَ أحداً من أمّته أراد أن لا
“တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ကား၎င်း၏အွန် မသ်နောက်လိုက်၊နောက်သားမည်သူတစ်ယောက်မျှမပင်ပန်းရန်ဖြစ်ပေ သည်။”
الظهر و العصر و المغرب و العشاء فى المدينة جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله)بين
အဗ်နေအဘာစ်က တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားရည်ရွယ်ချက်သည်အ ဘယ်အရာဖြစ်ပါသနည်းဟုမေးမြန်းရာ-
بدت النجوم و جعل الناس يقولون خطبنا ابن عبّاس يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس و
: لا يتنى : الصلوة، الصلوة فقال الصلاة الصلاة! قال فجائه رجل من بنى تميم لا يفتر و رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله)جمع بين الظهر:عبّاس أتعلمنى بالسنّة، لا أمّ لك ثمّ قال
عبدالله بن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شىء فأتيت والعصر والمغرب والعشاء قال
جميعاً و ثمانياً جميعاً صلّى النبى(صلى الله عليه وآله) سبعاً
الظهر والعصر و بين المغرب و العشاء بالمدينة جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله)بين
عبّاس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمّته من غير خوف و لا مطر قال : فقيل لابن
အဗ်နေအဘာစ်အားမေးမြန်းရာ“တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်မိမိအွန် မသ်အားမပင်ပန်းစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဖြေကြားခဲ့ပေသည်။ ”
၆။အဟ်မဒ်ဗင်ဟန်ဗဲရ်သည်အထက်ပါဟဒီးစ်နှင့်တူသောဟဒီးစ်ကိုမိမိကျမ်းမိုစ်နက်၌အဗ်ဒေအဘာစ်မှတစ်ဆင့်ရေးသားထားပေသည်။ ၇။အေမာမ်မာလစ်ကျော်ကြားသော(စွန်နီအေမာမ်)သည်မိမိ၏ကျမ်း (မောင်းသာ)၌မဒီနာမြို့အကြောင်းရေးသား၍အဗ်နေအဘာစ်၏ရီဝါယတ်ကို
جميعاً و المغرب و العشاء جميعاً صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)الظهر والعصر
“တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်အန္တရာယ်မရှိ၊မိုးမရွာသော်လည်းနမာဇ်ဇ ဟိုရ်နှင့်အစဲရ်၊မဂဲရစ်(ဂ)နှင့်အေရှာကိုပေါင်းဖတ်တော်မူခဲ့၏။ ”
الله(صلى الله عليه وآله) مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر و المغرب جمع لنا رسول
جمع رجل أمّته ان
والمغرب والعشاء فى المدينة جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر
المدينة من غير خوف جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) بين الصلوتين فى
الأولى و العصر و المغرب و العشاء فقيل له جمع رسول الله(صلى الله عليه وآله)، بين
“တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်မဒီနာမြို့၌နမာဇ်ဇဟိုရ်နှင့်အစဲရ်၊မဂဲရစ်(ဂ) နှင့်အေရှာကိုပေါင်းဖတ်တော်မူခဲ့၏။ တစ်ဦး၊တစ်ယောက်အနေဖြင့်မေး မြန်းရာအွန်မသ်မပင်ပန်းစေဖို့အတွက်ဖြစ်သည်ဟုဖြေလေသည်။”
ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သောဟဒီးစ်တော်များအားလုံးသည်အဟ်လေ စွန္နတ်၏ကျော်ကြားသောကျမ်းကြီးများ၌ပါဝင်ပြီးဆန့်ကျင်သူတိုင်းသည် ကျော်ကြားသောသာဝကတော်များဖြစ်ကြပါသည်။
ပထမဦးဆုံးအချက်သည်-“တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်အထူးအခက် အခဲများဖြစ်သောဥပမာ-လမ်းခရီး၌မိုးရွာသွန်းချိန်၊ရန်သူ၏အန္တရာယ်မရှိ ဘဲနမာဇ်ကိုပေါင်းဖတ်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။”
ဒုတိယအချက်သည်-“တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ကား မိမိအွန်မသ်နောက်လိုက်များလွယ်ကူမှုနှင့်မပင်ပန်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပေ သည်။”
၎င်းသူတို့သည်မွတ်စလင်လူငယ်တစ်ယောက်နေရာတိုင်း၊အခြေအနေတိုင်းမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်စေ၊မဖြစ်စေ၊တက္ကသိုလ်၊ရုံး၊စက်ရုံများ၌ အစ္စလာမ်သာသနာ၏အရေးအကြီးဆုံးတာဝန်(နမာဇ်(၅)ကြိမ်ကိုလွယ် လွယ်ကူကူဖြတ်ဖို့သဘောမတူပါသလော?
“တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်မျိုးဆက်သစ်မွတ်စလင်များနှင့်ခေတ်တိုင်းကိုသိရှိနေပြီး၊အကယ်၍(၅)ကြိမ်နမာဇ်ကို(၅)ချိန်ဖတ်ဖို့အတင်းသတ်မှတ် လိုကလျှင်မဖတ်သူအရေအတွက်များပြားလာမည်ကိုကြိုသိနေသဖြင့်မိမိ အွန်မသ်နောက်လိုက်၊နောက်သားများ၊အပေါ်စေတနာထားပြီးနမာဇ်ကို လွယ်ကူမှုရှိရန်နေရာတိုင်း၊သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းပေါင်းဖတ်ခွင့်ပေးထားပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်အားနမာဇ်အချိန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍လေ့လာသည့်အခါသုံးကြိမ်သာရှိကြောင်းအာယတ်တော်(၂)ပါးကိုလေ့လာနိုင် မည်ဖြစ်ပါ သည်။သို့သော်အချို့သူများသည်အာယတ်တော်ရှိနေပါလျက်(၅) ကြိမ်နမာဇ် ကို(၅)ချိန်သာဖတ်ရမည်ဝါဂျစ်(ပ)ဟုခဏခဏပြောနေခြင်းသည်အံ့ဩစရာပင်။
مِنَ اللَّيْلِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفاً
طرفى النهار ဟုသုံးထားခြင်းမှာနမာဇ်ဖဂ်ျကိုဆိုလိုပါသည်။မနက် ဝေလီဝေလင်းဖတ်ရွတ်ရပါသည်။ထို့အပြင်ဇဟိုရ်နှင့်အစဲရ်၏အချိန်သည်
သို့သော် زلفاً من الليل ကိုဂရုပြုလျှင် زلف စကားလုံးသည် مختار الصحاح နှင့် كتاب مفردات အဘိဓာန်များလေ့လာကြည့်လျှင် زلفة ၏အများကိန်းဖြစ် ကြောင်း၊ည၏ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ဆိုလိုသည် မှာမဂဲရစ်(ဂ) နှင့်အေရှာဖြစ်ပါသည်။
စူရဟ်အစ်ရအ်( اسراء )အာယတ်တော်အမှတ်၇၈ဖြစ်ပါသည်။
اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
“နမာဇ်ကိုနေမွန်းတည့်ချိန်ဇဟိုရ်မှစ၍ည၏အမှောင်လွှမ်းသည့်အချိန်အထိ ဖတ်ရွတ်ပါလေ။ထိုနည်းတူစွာကုရ်အာန်နေဖဂ်ျ(နမာဇ်ဖဂ်ျ)ကိုလည်းဖတ် ရွတ်ပါလေ။ ”
دلوك ၏အဓိပ္ပါယ်မှာဆွဲဆောင်ခြင်းဟုဖြစ်ပြီး၊ဤနေရာ၌နေမင်းက နေမွန်းတည့်ချိန်အထိဆွဲဆောင်လာသည်။နေမွန်းတည့်ချိန်ကိုဇဟိုရ်အချိန်ဟုဆိုလိုပါ သည်။
غسق الليل အဓိပ္ပါယ်သည်ည၏အမှောင်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပြီးအချို့အနေဖြင့် ည ၏ပထမဆုံးအစိတ်အပိုင်းဟုအကျယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
အချို့အနေဖြင့်ညသန်းခေါင်ကိုထပြီး၊ مفردات အဘိဓာန်၌ညဉ့်နက်ချိန်၊ သန်းခေါင်ယံအချိန်ကိုဆိုလိုထားပေသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ دلوك شمس ဆိုသည့်ဇဟိုနမာဇ်ဖတ်ချိန်ဖြစ်ပြီး၊ غسق الليل ဆိုသည်မှာနောက်ဆုံးမဂဲရစ်(ဂ)နှင့်အေရှာဖြစ်ပြီး၊ကုရ်အာန်နေဖဂ်ျဆိုသည်မှာနမာဇ်ဖဂ်ျဖြစ်ပါသည်။
عبارة عن أول المغرب و على هذا التقدير يكون المذكور فى الاية ـ كان الغسق
الزوال و وقت أول المغرب و وقت الفجر، و هذا يقتضى أن يكون ثلاث اوقات وقت
العصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلوتين و أن يكون الزوال وقتاً للظهر و والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلوتين فهذ أول المغرب وقتاً للمغرب
بين الظهر والعصر و المغرب و العشاء مطلقاً يقتضى جواز الجمع
غسق ၏အဓိပ္ပါယ်မှာည၏ပထမဆုံးဦးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အဗ်နေအဘာစ်၊အသာဗင်ရှာမီးလ်တို့၏အဓိပ္ပါယ်ဖိုဆိုသည်လည်းဤအ တိုင်းဖြစ်လေ၏။ غسق မဂဲရစ်(ဂ)၏ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ် ပါ၍အာယတ်တော်ပါရှိသည်မှာအချိန်(၃)ချိန်ဖြစ်ပါသည်။
နေမွန်းတည့်ချိန်၊မဂဲရစ်(ဂ)၏ပထမဆုံးအချိန်(ညအချိန်)၊ဖဂ်ျရ်မိုး သောက်ချိန်၊သို့ဖြစ်ပါ၍နေမွန်းတည့်ချိန်သည်နမာဇ်ဇဟိုရ်နှင့်အစဲရ်၊ချိန်ဖြစ် ပြီး(တစ်ချိန်နှင့်တစ်ချိန်ဆက်နေပါသည်။)၊မဂဲရစ်(ဂ)၏ပထမဆုံးအချိန် သည် နမာဇ်မဂဲရစ်(ဂ)နှင့်အေရှာဖြစ်ပါသည်။(တစ်ချိန်နှင့်တစ်ချိန်ဆက်နေပါသည်။)
အားလုံး၏ရလဒ်သည်ကား-နမာဇ်ဇဟိုရ်နှင့်အစဲရ်၊မဂဲရစ်(ဂ)နှင့် အေရှာကို ပေါင်းဖတ်ခွင့်ရှိကြောင်းဖြစ်ပေသည်။
ဖခ်ရဇီးသည်ဒီအထိအာယတ်တော်၏ဆိုလိုချက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြနေပြီး၊ရှေ့၌ဆက်၍နမာဇ်နှစ်ခုအားအခက်အခဲမရှိဘဲ၊လမ်းခရီး၌မဟုတ်ဘဲ၊ဖတ်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားကျွန်တော်မှာရှိ သည့် အတွက်၊ဤအာယတ်တော်၏ဆိုလိုချက်မှာ-အခက်အခဲများရှိနေ ချိန်၌ နမာဇ်ကိုပေါင်းဖတ်ရမည်ဟူ၍ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်(မကာရမ်းရှာရာဇီး)ဖစ်ရဇီးအားပြောကြားခြင်း မှာ-နမာဇ်နှစ်ခုကိုအခက်အခဲများရှိနေချိနမှသာပေါင်းဖတ်လိုရသည်ဟူ သော်အထောက်အထားတစ်ခုကိုမျှမတွေ့ရဘဲ၊ဆန့်ကျင်ဘက်အခက်အခဲမရှိလဲပေါင်းဖတ်ခွင့်ရှိသည်ဆိုသောရီဝါယတ်တောအမြောက်အများပါရှိပေသည်။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်အခက်အခဲများမရှိဘဲ၊နမာဇ်ကိုပေါင်းဖတ်ခဲ့ကြောင်း၊အွန်မသ်အတွက်လွယ်ကူမှုနှင့်မပင်ပန်းစေရန်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှေ့၌ဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
علم اصول အရဤလုပ်ရပ်သည်မမှန်ကန်ချေ။
၂။စွန်နီ၊ရှီအာရီဝါယတ်ကျမ်းများအရတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်နမာဇ်ကိုအခက်အခဲမရှိဘဲပေါင်းဖတ်ကာ၊အွန်မသ်နောက်လိုက်များကိုမပင်ပန်း ရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်းပါရှိပေသည်။
၃။နမာဇ်ကို(၅)ကြိမ်ဝတ်ပြုလျှင်ပိုမြင့်မြတ်ပေသည်။သို့သော်အတင်းခဏ၊ခဏ(၅)ကြိမ်တိုင်းကို(၅)ချိန်သာဖတ်ရမည်ဟုပြောခြင်း၊ပေါင်းဖတ်ပိုင်ခွင့်ရှိ လျက် လက်မခံခြင်းဖြင့်လူတော်တော်များများ၊အထူးသဖြင့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ နမာဇ်နှင့်ဝေးသွားပေလိမ့်မည်။သို့ဖြစ်ပါ၍သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပေါင်းဖတ်ခြင်းကိုမငြင်းပယ်ဖို့တာဝန်ရှိပေသည်။
ကျွန်တောအနေဖြင့်ပေါင်းဖတ်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုလက်ခံဖို့ထပ်ပြီး မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည်။ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်၌မြောက်များစွာသော အလုပ်သမားများ၊ဝန်ထမ်းများ၊ကျောင်းသား/သူများ၊တက္ကသိုလ်ကျောင်း သား/သူများ(၅)ကြိမ်နမာဇ်ကို(၅)ချိန်၌ဖတ်ဖို့အရမ်းခက်ခဲကျပ်တည်းခဲယဉ်းပေသည်။
ဒီလိုအခြေအနေ၌လူထုအနေဖြင့်အကြောင်းပြပြီးနမာဇ်ကိုမစွန့် လွတ်ရန်အတွက်တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ပေါင်းဖတ်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုသော ခွင့်ပြုချက်ကိုလက်မခံသင့်ပါသလော?